PureOS, kugovera kune avo vane hanya zvakanyanya nezve kwavo kuvanzika | Linux Vakapindwa muropa
Kuvanzika chinhu chinowedzera kunetsekana vashandisi vetekinoroji. Izvi zvakakonzera kugoverwa kwakanangidzirwa pane zvakavanzika zvevashandisi uye chengetedzo. Imwe yeanonyanya kufarirwa uye zvakare isingazivikanwe nevazhinji vashandisi inonzi PureOS. PureOS kugovera kunobva paDebian Kuedzwa kweFrance kwakatangira.
PureOS kugovera kunotsigirwa uye kunochengetwa nekambani yePurism, iyo kambani iri kumashure kweLibrem5, yemahara smartphone. Uye izvi zvichaita PureOS kugovera kwekutanga kuve pane yekutanga Linux smartphone munhoroondo.
PureOS kugovera izvo inoshandisa Gnome 3 seye default desktop uye Wayland seye graphical server. KwakachenaOS iri FSF yakasimbiswa kugoverwa, ndiko kuti, kugoverwa kwakasununguka uye kwakachengeteka, sekumwe kugovera kwakadai saTrisquel, gNewSense kana Parabola, pakati pevamwe. Izvi zvinoreva kuti makomputa mazhinji ane matambudziko nekugoverwa uku achavawo nematambudziko nePureOS.
PureOS inosanganisira yemahara software, zvachose yemahara, chimwe chinhu chakanakira vashandisi vazhinji, asi izvo zvinoita kuti isu tive nemaapplication mashoma pane atinawo parizvino mune kumwe kugovera kweGnu / Linux. Chero zvazvingaitika, PureOS inopa zvinonakidza zvinyorwa uye zvigadziriso zvakaita sePure Browser kumisikidzwa. Pure Browser ndeye webhu bhurawuza yakavakirwa paMozilla Firefox iyo inoshandisa DuckDuck Go seyakajairwa yekutsvaga injini uye https kwese kwese kubhurawuza.. PureOS parizvino iri kuenda kune yayo vhezheni 7 kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti ikozvino yagadzirira kurodha beta yeshanduro 8. Vhezheni yatinogona kupfuura nayo iyo yepamutemo webhusaiti wekugovera.
PureOS ichave iripo muLibrem 5, saka kana tichida kushandisa iyi smartphone zvinokurudzirwa kuyedza kugovera uku, kunyangwe iine Gnome 3, maitiro ayo ekugadzirisa haazove akaomarara semamwe mafoni nyowani kana mune kumwe kugovera.
Ini pachangu, ini ndinoona kugovera uku kuchinakidza nekuti inosanganisa software neyakavanzika uye chengetedzo, zvinhu zvatiri kuisa parutivi nguva dzese asi izvo zvakakosha kubasa rezuva nezuva. Iyo yega yekumusoro pasi yandinoona nePureOS ndeyekuganhurwa kwayo kana zvasvika pakupa shanduro, ndiko kuti, hapana "flavour" ine mamwe ma desktops uye maturusi. Uye newe, Chii chaunosuwa mukugovera uku? Wakamboedza PureOS here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » PureOS, kugovera kune avo vane hanya zvakanyanya nezve kwavo kuvanzika
Mhoroi, ndine mubvunzo pamusoro pemutsara wekutanga wechigwaro chechina:
"PureOS inosanganisira yemahara software, yemahara zvachose, chimwe chinhu chakanakira vashandisi vazhinji, asi zvinoreva kuti isu tine mashoma mashandisiro pane atinawo parizvino mune kumwe kugoverwa kweGnu / Linux."
Zvinoenderana neiyo GNU saiti:
"Chii chinonzi GNU?, GNU ndeye mahara software inoshanda sisitimu"
Kana GNU iri yemahara software, zvingave sei kuti PureOs inosanganisira yemahara software kunyorera asi iine mashoma emahara software kunyorera kupfuura kumwe kugovera kuri zvakare GNU / Linux?
Kana iwe uine yemahara software compiler uye iwe uine mukana kune iyo sosi kodhi yeimwe yemahara software, iwe unogona kuinyora iyo sekune mune chero kunowanikwa GNU / Linux kugovera uye iwe uchave unayo.
Inoreva software yemahara, ichokwadi kuti kune akawanda maLinux anogoverwa, asi havazi vese vanogona kuzvirumbidza 100% yemahara software, semuenzaniso, kana kugovera kuchisanganisira Chrome, yatoraswa sesoftware yemahara, nekuti bhurawuza iri rinoshandisa rezinesi rezviridzi. .
Rangarira kuti Yemahara Software ndeye rusununguko uye kwete mutengo.
@ wcd6 Ini ndinofunga inoreva kunyorera zvine chekuita nazvo: kumwe kugovera (uko kusinga bvumidzwe neFSF) kubvumidza kurongedzwa kwechengetedzo software muzvivakwa zvavo, kana kunyatso kuisanganisira muhurongwa. Naizvozvo, ivo vanopa yakakura yakakura mhando yekushandisa
Pindura kuna filipo
@filipo, uri kutaura chokwadi, mubvunzo wangu wakakonzerwa nekufungidzira kuti izwi rekuti "GNU / Linux" raive nerevo imwe chete, uye harina, nekuti rinogona kureva:
* GNU ine Linux, uye uko Linux iri zvachose GNU.
* GNU neLinux, uye uko Linux inogona kuve nezvikamu zviri GNU uye zvimwe zviri zvemhando imwe kana anopfuura.
Munyori anoratidza kuvanzika nekuchengeteka, asi haaratidze chero chinhu pamusoro pazvo. Ndinotsanangura.
Disttro Kali, ine thor, encryption, proxy yakapfava uye fw, asi mune ino distro kubva pane zvinotaurwa nemunyori, iwe unofanirwa kutenda izwi rake, kana iwe enda kune webhusaiti ye distro uye uko iwe unoverenga woziva.
Chinyorwa chakajairwa nekudzvanya-kunova-kas
Pindura kuna luison